Hab cusub oo dhaqso loogu helo cudur sambabada oo loo yaqaan KOL - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Hab cusub oo dhaqso loogu helo cudur sambabada oo loo yaqaan KOL
La daabacay onsdag 17 juli 2013 kl 16.32
Sawirle: United States Department of Health and Human Services
Waxaa hadda la wadaa hab cusub oo tijaabo ah oo goor hore lagu ogaanayo dadka bukaanka ah oo khatarta ugu sugan in uu ku dhaco cudurka sambabada oo afka iswiidhishka loogu soo gaabiyo KOL (nooc boronkiito waarta). Gobolka Västerbotten waxaa hadda ka socda mashruuc loogu deeqayo dadka 40 sano gaaray oo sigaarka cabba, ama horay u cabbi jirey ama la soo noolaa qof sigaarya-cab ah in raajo laga saaro sambabada. Dadkaas bukaanka ahna waa la soo dhoweynayaa mar walba iyadoo aan loo eegin haddii ay la xiriireen rugaha daryeelka caafimaadka iyo haddii kale.
Håkan Larsson oo madax ka ah hay’adda daryeelka caafimaadka gobolka Västerbotten oo ka hadlaya arrintaan ayaa yiri:
- KOL waa cudur dad badan ku dhaca. Mashruucaanina wuxuu waxtar ballaaran u yeelan karaa dadka bukaanka ah iyo bulshada guud ahaan haddii aan goor hore ogaanno dadka cudurkaan qaada ama uu ku dhaco. Sidaas awgeed ayaa hadda u dooneynna inaan dadka raajo ka qaadno.
Astaamaha cudurka KOL lagu garto waxaa ka mid ah iyadoo lala qufaco qufaca sigaarya-cabka, kadibna qofka neeftu ku adkaato. Haddii caabuq ama caallir socda toddobaadyo badan uu galo dhuumaha neefsiga, waxay astaan u noqon kartaa in la qaaday cudurka KOL, laakiin waxaa dhici kartaa lagu qaldo qufaca caadiga ah ee da’du keento.